EU: Askarta AMISOM oo mushaar la siinayo. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
EU: Askarta AMISOM oo mushaar la siinayo.
Ciiddanka AMISOM oo aan wax Mushaar ah la siinin Shantii bilood ee ugu dambeysay ayaa waxaa haatan loo sheegay inay helayaan Mushaarkooda.
Ururka Midowga Afrika ayaa ku sheegay War-saxaafadeed uu E-mail ugu diray AMISOM inay Ururka Midowga Europe (EU) bixin doonaan lacag dhan 165 million oo Euro ah, una dhiganta 187 million oo Dollar, si loogu maalgeliyo Hawlgalka AMISOM ee ay kula dagaalamayaan Xarakadda Alshabaab.
War Saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in Kharajkaasi loo adeegsan doono in la bixiyo Mushaaraadka Milliteriga, Boliska iyo Rayidka ka tirsan Hawlgalka AMISOM iyo Kharajaadkii Toddobada bilood ee ugu dambeysay Sannadkan.
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, Hawlgalka AMISOM waxaa hareeyey Maamul-xumo ay ku jiraan inay Ciiddanka xaadaan qalabka, kadib, markii aan la siinin wax mushaarad ah.
Bishii September ee la soo dhaafay, Warbaahinta dalka Uganda waxay soo weriyeen in Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM aan wax mushaar ah la siinin muddo 9 bilood ah, oo ay u sii dheer tahay inay Ciiddan badan kaga dhinteen Weerarkii ay Dagaalamayaasha Alshabaab bilowgii bishii la soo dhaafay la beegsadeen Ciiddanka Uganda ee ku sugnaa Deegaanka Janaale ee Gobalka Sh/hoose.
Dhinaca kale, Dowladda Federalka Somalia ayaa waxay dadaal ugu jirtay sidii ay Mushaaraad ugu heli lahayeen Ciiddanka Dowladda ee taageeradda siiya Hawlgalka AMISOM.
Toddobaadkii la soo dhaafay ayey Dowladda Imaaraadka Carabta saxiixday Heshiis ay ku bixin doonto qeyb ka mid ah Mushaaraadka Ciiddanka Qaranka ee Somalia.
Kenyaan Imaam Masjid ah oo lagu soo oogay inuu carruur u qorayey Alshabaab